10:59 AM | Posted by Unknown
(မဇ္ဈိမ) ။ ။ မြန်မာရွှေ့ပြောင်း လုပ်သားများအရေး ဆောင်ရွက်ပေးသည့် မစ္စတာ Charles Hector ကို ကွန်ပြူတာပစ္စည်း ကိုယ်ထည်ထုတ် Asahi Kosei (M) Sdn. Bhd ကုမ္ပဏီက ပြန်တရားစွဲမည့် ငွေတောင်းစာ ပေးပို့ထားသည်ဟု မလေးရှိ အလုပ်သမားအခွင့် လှုပ်ရှားသည့် အဖွဲ့များထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
မလေးရှားတွင် နှစ် ၂ဝ ကျော် လူ့အခွင့်အရေး လိုက်လံ လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် မလေးနိုင်ငံသား Charles Hector ကို Asahi Kosei (M) Sdn. Bhd က ယခုလ ၁၁ ရက် နေ့စွဲဖြင့် မလေးရှားငွေ ရင်းဂစ် ၁ဝ သန်းနှင့်ညီသည့် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃,၂၇၆,၅၄ဝ ပေးလျော်ရန်နှင့် မပေးပါက တရားစွဲသွားမည်ဟု စာရေးသားပေးပို့ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဤသည်မှာ ၎င်းကုမ္ပဏီက မြန်မာလုပ်သား ၃၁ ဦးအပေါ် ဖိနှိပ်မှုများအတွက် ကမ္ဘာတလွှား အလုပ်သမားအရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ ၈၁ ဖွဲ့က ပြီးခဲ့သည့် သောကြာနေ့ထုတ် ကန့်ကွက်ကြေညာချက်နှင့် ဆက်စပ်သည်ဟု မလေးရှား ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကွန်ယက် NAMM မှ ခွန်ပရာ နွန်ဆွမ်ဝေါင်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ကြေညာချက်ထဲတွင် ကုမ္ပဏီသည် မြန်မာအလုပ်သမားများကို လုပ်အားခများအတွက် စာချုပ်အတိုင်း မပေးဘဲ လျှော့ပေးခြင်း၊ လုပ်အားခမှ အဆောင်စရိတ် ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ အလုပ်မဆင်းနိုင်သည့် အလုပ်သမားများကို တရက်လျှင် ရင်းဂစ် ၅ဝ ဖြတ်တောက်ခြင်းများ ပြုခဲ့သည်ဟု ရေးထားသည်။
“ကြေညာချက်မှာ ဒီနိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေတွေအပြင် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများ စောင့်စည်းလိုက်နာအပ်သော စည်းမျဉ်းများ Electronic Industry Code of Conduct အရ အရေးယူဖို့ပါ တိုက်တွန်းထားလို့ သူတို့ကို နိုင်ငံတကာက အရေးမယူခင် လက်ဦးမှုရအောင် လုပ်တာ” ဟု ခွန်ပရာက ဆိုသည်။
Burma Campaign (မလေးရှား) မှ ကိုထွန်းထွန်းက “ဒီမှာ အလုပ်သမားအမှုတွေဖြစ်တိုင်း သူ့ (Charles Hector) ဆီက ဥပဒေကြောင်းအရ အကြံဉာဏ် တောင်းရတယ်။ ဒါ့အပြင် လုပ်ကိုင်ရမယ့် နည်းနာတွေကိုလည်း သူက ပြောပြတယ်။ လိုအပ်လို့ ကြေညာချက်တွေ ထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်း ဥပဒေအရ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ရေးနိုင်တယ်” ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
Charles Hector သည် ၂ဝဝ၅-ဝ၆ ခုနှစ်တွင် မလေးရှား ဘားကောင်စီအဖွဲ့ဝင်၊ ၂ဝဝ၅-၂ဝဝ၇ တွင် ခွဲခြားမှု အဆုံးသတ်ရေး ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ၊ သေဒဏ်နှင့် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု ဆန့်ကျင်ရေး MADPET ကော်မတီ၏ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးမှူး တဦးလည်း ဖြစ်သည်။
Asahi Kosei (M) Sdn. Bhd ကုမ္ပဏီက ငွေတောင်းခံလွှာအား ယခုတပတ် တနင်္လာနေ့ မနက်တွင် မစ္စတာ Hector ၏ နေအိမ်သို့ ပေးပို့ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီမှာ ကွန်ပြူတာစက်ပစ္စည်းအပြင် ဗီဒီယိုအစိတ်အပိုင်းများ၊ ယာဉ်နှင့် စက်ပစ္စည်း သတ္တုကိုယ်ထည်များ ပုံလောင်းသည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။
မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများက မလေးရှား အလုပ်သမားအရေး ဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့များထံ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ၎င်းတို့အပေါ် ကုမ္ပဏီက ဖိနှိပ်နေမှုနှင့် မလေးရဲ အပါအဝင် လူတစုက ယခုလ ၇ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမားအဆောင်များသို့ လာရောက်ခြိမ်းခြောက်ကာ မီးဖိုချောင်သုံး ပစ္စည်းများ၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ စားပွဲ၊ ရုပ်မြင်သံကြား၊ ပန်ကာ စသည်တို့ကို ယူဆောင်သွားခဲ့ကြောင်း တိုင်တန်းခဲ့သည်ဟု ၈၁ ဖွဲ့ ကြေညာချက်ထဲတွင် ပါရှိသည်။
ယခုလ ၉ ရက်နေ့တွင် ကုမ္ပဏီနှင့် အလုပ်သမားများ အစည်းအဝေးတွင် လုပ်အားခကို ယခင် ရင်းဂစ် ၂ဝ မှ ၂၃ ရင်းဂစ်သို့ လည်းကောင်း၊ ရက်ပျက်လျှင် နှုတ်ယူသည့် ရင်းဂစ် ၅ဝ အစား တလတွင် ၂ ရက်ပျက်မှသာ ဖြတ်တောက်မည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အဆောင်ခကို ယခင် တလ ၅ဝ ကောက်ခံရမှ ၃ဝ သို့ လျော့ချပေးမည်ဟု ဆိုကာ စာချုပ်အသစ်တွင် စဉ်းစားချိန် မပေးဘဲ လက်မှတ် ရေးထိုးစေခဲ့ကြောင်း ၈၁ ဖွဲ့ ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
“အလုပ်သမားတွေပြောတာက သူတို့အခွင့်အရေးအတွက် ရပ်တည်မယ်ဆိုရင် ပြန်ပို့မယ်လို့ ထပ်တလဲလဲ ခြိမ်းခြောက်နေပါတယ်တဲ့။ အဲဒါအတွက်ကြောင့်လည်း သူတို့ မလွှဲမရှောင်သာ လက်မှတ်ထိုးလိုက်ရတာပါလို့ ပြောပါတယ်” ဟု ခွန်ပရာ နွန်ဆွမ်ဝေါင်က ပြောသည်။
စာချုပ်ကို မြန်မာအလုပ်သမား ကိုအောင်ဆန်းနှင့် ကိုသီဟစိုးမှလွဲ၍ အားလုံး လက်မှတ်ထိုးခဲ့သည်။ အဆိုပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကိုအောင်ဆန်းက အလုပ်သမားများကိုယ်စား ယခုလ ၈ ရက်နေ့နှင့် ၉ ရက်နေ့တွင် မလေးရှား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်နှင့် မလေးရှား အလုပ်သမားဌာနသို့ လက်မှတ်ရေးထိုးကာ တိုင်ကြားခဲ့သည်။
“ဒီအမှုကို ပြီးတဲ့အထိ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားမယ်။ ဒီလိုမလုပ်ဘဲနေရင် မြန်မာပြည်က အေးဂျင့်က အခုလိုပဲ လူတွေထပ်ပို့ပြီး ဒုက္ခဖြစ်အောင် လုပ်နေမှာ။ ဒါကို ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ လုပ်ရမယ်” ဟု ကိုအောင်ဆန်းက ဆိုသည်။ သူတို့နှစ်ဦးမှာ ယခုအခါ ပုန်းရှောင်နေကြရသည်။
“ကျမတို့ မျှော်လင့်တာက မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့ သောကတွေအတွက် တရားမျှတမှုရအောင် ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ သူ့ကို ကုမ္ပဏီက အခုလို တရားစွဲတာကို ချက်ချင်း ရပ်တန့်ဖို့ ကမ္ဘာတဝှမ်းကနေ ဖိအားပေး တိုက်တွန်းစေချင်တာပါပဲ” ဟု ခွန်ပရာ နွန်ဆွမ်ဝေါင်က ပြောသည်။
10:58 AM | Posted by Unknown
စစ်အစိုးရတင်မြောက်သည့် ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အား ကချင်များလက်မခံ
10:54 AM | Posted by Unknown
မြန်မာစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်သော ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်၌ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ကချင်ဗုဓ္ဒဘာသာဝင် ဦးလဂျွန်ငန်ဆိုင်းအား ရွေးချယ်တင်မြောက်လိုက်ရာ ကချင်များလက်ခံကြိုဆိုခြင်း မရှိကြောင်းသိရသည်။
ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝင် ဦးမဂျွယ်မရိုင်ဒူဝါ လဂျွန်ငန်ဆိုင်းအား ရွေးချယ်ခြင်းသည် စစ်အစိုးရမှ ကချင်ပြည်နယ်အား ကချင်လူမျိုးကိုယ်တိုင် အုပ်ချုပ်နေသည်ဟု ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်အောင် ဖန်တီးခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း ကချင်များထင်မြင်ထား သည်။
ဦးလဂျွန်ငန်ဆိုင်းအား မြန်မာစစ်အစိုးရမှ အဓိကခန့်အပ်ထားခြင်းသည် ကြံ့ဖွံ့ပါတီဝင်လည်းဖြစ် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ယုံကြည်သူလည်းဖြစ်သည့် အလျောက် ပေးအပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၈၈ မျိုးဆက် ကချင်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်ဦးအောင်ဝါမှ သုံးသပ်သည်။
ထိုနည်းတူကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO)၊ လိုင်ဇာဌာနချုပ်မှ အရာရှိ တစ်ဦးမှလည်း “ခရစ်ယာန် ကချင်များကိုဦးဆောင်ရန် ဗုဒ္ဓဘာဘာဝင် ငန်ဆိုင်းကို ရွေးချယ်လိုက်ခြင်းဟာ အစိုးရသစ်က ယခင်အစိုးရဟောင်းများ ပြုလုပ်သည့်အတိုင်း ဗုဒ္ဓဘာသာသွတ်သွင်းခြင်း (Buddhism) အစီအစဉ်ကို ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်နေတာဖြစ်တယ်” ဟု ထိုင်းအခြေစိုက် ကချင်သတင်းဌာနသို့ ပြောဆိုခဲ့သည်။
နောက်ပြီး ပြီးခဲ့သည့်နှစ် စစ်အစိုးရ၏ ပြည်လုံးကျွတ်ရွေးကောက်ပွဲအား ခရစ်ယာန်များ၏ ဥပုဒ် တနင်္ဂနွေနေ့ (နိုဝင်ဘာဘ ၇၊ ၂၀၁၁) တွင် စီစဉ်ကျင်းပခဲ့ခြင်းသည် တိုင်းရင်းပေါင်းစုံမှီတင်းနေထိုင်သည့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံရှိ ခရစ်ယာန်များအား ဘာသာရေးအရဖိနှိပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်း သူ့အမြင်သုံးသပ်သွားသည်။
ဦးငန်ဆိုင်း ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခြင်းဖြင့် “ပြည်သူလူထုအတွက် အလားလာကောင်းဖြစ်ပေါ်ရန်၊ မျှော်လင့်ရန် မရှိကြောင်း” ကချင်အမျိုးသားကောင်စီ (Kachin National Council, KNC) နှင့် ကချင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (Kachin National Organization, KNO) ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဖြစ်သူ ယူကေနိုင်ငံ၊ လန်ဒန်မြို့တွင်နေထိုင်သူ ရှေ့နေဟောင်း ဦးခွန်ဆာမှ ရှုမြင်သည်။
“ငန်ဆိုင်းမှာ ကချင်လူထုအတွက် နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးတိုးတက်ဖို့ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာလုံးဝ မရှိဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူဟာ စစ်အစိုးရအလိုကျ ပြဌါန်းထားတဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ နဲ့ သူ့အထက်က နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ မျက်နှာကိုကြည့်ပြီး သူ့၏ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ကချင်ပြည်နယ်ကို အုပ်ချုပ်ရမှာမို့လို့ပါ။”
စစ်အစိုးရက ကချင်ပြည်နယ်တွင် မည်သည့်နိုင်ငံရေးအတိုက်အခံပါတီမျှမရှိအောင် တားမြစ်ချုပ်ချယ်ထားချိန် ဦးငန်ဆိုင်းမှ ကချင်ပြည်သူများ၏ သာယာဝပြောရေးဆောင်ရွက်ရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်အောင်ဝါလည်းဆိုသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတလောင်း ဦးသိန်းစိန်၏ ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ဦးလဂျွန်ငန်ဆိုင်းအား ရွေးချယ်တင်သွင်းချက်ပေါ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်က အကန့်အကွက်မရှိ အတည်ပြုကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ရက်နေ့ထုတ် စစ်အစိုးရသတင်းစာ The New Light of Myanmar ၌ ဖော်ပြပါရှိသည်။
ဦးငန်ဆိုင်းသည်အင်ဂျင်နီယာနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြင့် ရပ်တည်နေသူဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ဖခင် လဂျွန်တူးခေါင် (ကွယ်လွန်) သည်လည်း ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း အာဏာမသိမ်းမီ ဦးနုပါလီမန်ခေတ် (၁၉၄၈-၁၉၆၂) တွင် အမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ထို့ပြင် သူသည် ဦးနုပါလီမန်ခေတ် ဗမာလိုလားသူ ပထမဆုံးကချင်ပြည်နယ်ဥက္ကဋ္ဌ ဆမားဒူဝါဆင်ဝါးနောင် နှင့် ဆွေမျိုး တော်စပ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးရွေးကောက်ခံ ၀န်ကြီးချုပ် ဦးနုသည် ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာကို နိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ် ကြေငြာခဲ့ပြီး ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒကိုလည်း အစပြုခဲ့သည်။
ယခုလို လူများစုဗမာနှင့်ဗုဓ္ဒဘာသာဝင်ချင်းတူ ဦးလဂျွန်ငန်ဆိုင်းအား ခရစ်ယာန်ကချင်များ၏ ခေါင်းဆောင် ခန့်အပ်ခြင်းသည် “ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒ (Burmanization) နှင့် ဗုဓ္ဒဘာသာသွတ်သွင်းခြင်းဝါဒ (Buddhism)” ကို ထပ်မံ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟု KIO အရာရှိက သုံးသပ်သည်။
10:50 AM | Posted by Unknown
10:48 AM | Posted by Unknown
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနား အကျဉ်းထောင်တွင် နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ် ချမှတ်ခံထားရသော လူရွှင်တော် ကိုဇာဂနာ (ကိုသူရ) အား ဂျာမနီနိုင်ငံ ဘရီမင်မြို့က ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွက် ဘရီမင် စည်းလုံးညီညွတ်ရေးဆု (Bremen Solidarity Award) ကို ယမန်နေ့က ချီးမြှင့်လိုက်သည်။
ကိုဇာဂနာ၏ လူ့အခွင့်အရေးအတွက် ဆောင်ရွက်မှုနှင့် စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုများကြာင့် ဤဆုကို ချီးမြှင့်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဤ ဘရီမင်ဆုကို ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း ရရှိခဲ့ဖူးသည်။
ယင်းဆုကို အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေသော ကိုဇာဂနာ၏ မိသားစုဝင်များက သွားရောက်ယူမည် ဖြစ်ကြောင်း ကိုဇာဂနာ၏ ခယ်မဖြစ်သူ မငြိမ်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“ကိုသူရရဲ့ မိသားစုက နိုင်ငံခြားမှာ ရှိနေတော့ အရင် ဆုတွေရတုန်းက ဆုပေးတဲ့နိုင်ငံတွေကို အဆက်အသွယ်လုပ်ပြီး ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောပေးဖို့ ကျမကတဆင့် မှာလေ့ရှိပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ဘရီမင် စည်းလုံးညီညွတ်ရေးဆုကို လွတ်လပ်မှု၊ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးအတွက် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်နေသူများ၊ နယ်ချဲ့လွှမ်းမိုးမှုနှင့် အသားအရောင် ခွဲခြားမှုကို ဆန့်ကျင်နေသူများကို ၂ နှစ် တကြိမ် ရွေးချယ်၍ ဆုပေးလေ့ရှိကြောင်း၊ ဆုကြေးငွေ အဖြစ် ယူရိုငွေ ၁၀၀၀၀ ပေးအပ်ကြောင်း သိရသည်။
ကိုဇာဂနာသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလတွင် တိုက်ခတ်ခဲ့သည့် နာဂစ်မုန်တိုင်း ဒုက္ခသည် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်နေစဉ် ဇွန်လဆန်းပိုင်း၌ စမ်းချောင်း မြို့နယ်ရှိ နေအိမ်တွင် အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။
စစ်အစိုးရက ကိုဇာဂနာအား နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး ထိခိုက်စေရန်လှုံ့ဆော်မှု၊ ဗီဒီယိုအက် ဥပဒေနှင့် အီလက်ထရွန်နစ် အက်ဥပဒေ ၃ ခု အပါအဝင် ပုဒ်မ ၅ ခုဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၅၉ နှစ် ချမှတ်ခဲ့သည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် အာဏာပိုင်များက အီလက်ထရွန်နစ် အမှု တမှုလျှင် ၈ နှစ်စီဖြင့် ၂၄ နှစ် လျှော့ပေးခဲ့ရာ ယခုအခါ ထောင်ဒဏ် ၃၅ နှစ် ကျခံရမည်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံမှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ထွန်းကားရေး လှုပ်ရှားမှုများတွင် တက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့ပြီး စစ်အစိုးရက ၎င်းအား အကြိမ်ကြိမ် ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခဲ့သည်။
မကြာသေးမီက ဂျာမာန် ဟာသသရုပ်ဆောင်နှင့် အဆိုတော် မိုက်ကယ် မစ်တာနှင့် ဗြိတိသျှ ဒါရိုက်တာ ရက်ဇ် ဘလွန်စတိန်း တို့က ကိုဇာဂနာ အကြောင်းကို The prison where I live အမည်ရှိ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကို ရိုက်ကူးပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ အပါအဝင် နိုင်ငံများ၌ လှည့်လည် ပြသခဲ့သည်။
10:44 AM | Posted by Unknown
မစ်ခ်ျ မက်ကောနဲလ် (Mitch McConnell)
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ကင်တာကီပြည်နယ်က ၀ါရင့် ရီပတ်ဘလစ်ကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် ခေါင်းဆောင် မစ်ခ်ျ မက်ကောနဲလ် (Mitch McConnell) တို့ မနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ တယ်လီဖုန်း ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
10:20 AM | Posted by Unknown
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ အာဏာပိုင်များ ဖိအားကြောင့် အိမ်ရှင်က ရွှေ့ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သဖြင့် လူငယ်ကွန်ယက် ချိတ်ထားသည့် ဗေဒါသင်တန်းကျောင်း BAYDA Institute ကို ရန်ကုန်တိုင်း တာမွေမြို့မှ စမ်းချောင်းမြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့နေကြောင်း ကျောင်းအုပ် ဦးမျိုးရန်နောင်သိန်း အဆိုအရ သိရသည်။
တာမွေမြို့ ကျောက်မြောင်းရပ်ကွက် စိတ္တသုခလမ်း အိမ်အမှတ် ၂၃ မှ စမ်းချောင်းမြို့ အမှတ် ၇ စမ်းချောင်းလမ်းတွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် ပစ္စည်းများ ပြောင်းရွှေ့နေပြီး၊ ဖိအားကြောင့် သင်တန်းသားများအနေဖြင့် စိတ်ပျက်အားလျော့ခြင်း မရှိဟု ဆိုသည်။
“သင်တန်းသားတွေကတော့ဗျာ၊ ကျနော်တို့က ဒီကျောင်းစလုပ်ကတည်းက ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ ပေးခဲ့တာပဲ။ ကျောင်းသားတွေက အဲဒီစိတ်ဓာတ် ရတယ်ခင်ဗျာ့။ အဲဒီဖိအားပေးတဲ့အပေါ်မှာ စိတ်ပျက်ခြင်း၊ အားငယ်ခြင်း မရှိဘူး။ ဖိအားမပေးသင့်ဘူးလို့တော့ အားလုံးက ပြောကြတာပေါ့။ ပြီးတော့ ငါတို့ ဖြစ်အောင် လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်လည်း ဖြစ်တယ်” ဟု ဦးမျိုးရန်နောင်သိန်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း တာမွေမြို့ ကျောက်မြောင်းရပ်ကွက် စိတ္တသုခလမ်းတွင် ဖွင့်ထားသည့် BAYDA Institute တွင် နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုများ လုပ်နေသည်ဟုဆိုကာ ချက်ချင်းပြောင်းခိုင်းရန် အာဏာပိုင်များက အိမ်ရှင်မှတဆင့် ယခုလ ၈ ရက်နေ့တွင် ဖိအားပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
NLD ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကွန်ယက်ဖွဲ့ရေး ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် လူငယ်ကွန်ယက်များ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ရာ ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးမျိုးရန်နောင်သိန်း ဦးဆောင်သည့် Nation Youth Network လည်း ပါဝင်ချိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ပြီးခဲ့သည့်လ ၆ ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် Nation Youth Network နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် အစုအဖွဲ့ ၁ဝ၄ ခု၌ ဗေဒါသင်တန်းကျောင်းလည်း ပါဝင်လာခဲ့သည်။
ဗေဒါကျောင်း၌ လူမှုဆက်ဆံရေး Social Science ၊ ကမ္ဘာ့ပြဿနာများ သင်ခန်းစာ Global conflict ၊ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများကို လေ့လာခြင်း South East Asia Study နှင့် အခြေခံအင်္ဂလိပ် ဘာသာရပ်များကို နှစ်ပတ်သင်ခန်းစာအဖြစ် သင်ကြားပေးနေသည်။
တာမွေမြို့ ကျောက်မြောင်းရပ်ကွက်တွင် ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်း သင်တန်းများ စတင်ပို့ချလာခဲ့ရာမှ သင်တန်း အမှတ်စဉ် ၃ အရောက် ပြောင်းရွှေ့ရန် ဖိအားပေးခံရခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် အမှတ်စဉ် ၃ သင်တန်းဆင်းပွဲကို နေရာဟောင်း၌ပင် ကျင်းပခဲ့ရာ၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးနှင့် ပါတီခေါင်းဆောင်အချို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး၊ ဦးတင်ဦးက ယခုသင်ကြားပေးနေသည့် လူမှုရေး သိပ္ပံပညာရပ်များသည် အရေးကြီးကြောင်းနှင့် လူငယ်များ စိတ်ဓာတ်မကျရန် အမှာစကား ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်လ ၄ ရက်နေ့ အမှတ်စဉ် ၂ သင်တန်းဆင်းပွဲသို့ NLD ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လူငယ်များ ပညာရှာပြီး၊ ရလာသည့် ပညာရပ်များဖြင့် တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးသာမက ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားများအတွက် အသုံးချစေချင်ကြောင်းနှင့် လူငယ်များ အနာဂတ် တောက်ပစေလိုကြောင်း သဝဏ်လွှာ ပေးပို့ခဲ့သေးသည်။
ဗေဒါ သင်တန်းကျောင်းမှ သင်တန်းဆင်းပြီးသူများ ဦးဆောင်ကာ ရေတာရှည်၊ ပုသိမ်၊ မကွေး၊ ရွှေဘို၊ မန္တလေး၊ ပဲခူး မြို့များတွင်လည်း လူမှုရေး သိပ္ပံပညာရပ်များကို ပို့ချမှုများ ရှိနေကြောင်း ဦးမျိုးရန်နောင်သိန်းက ပြောသည်။
“ရေတာရှည်၊ ပုသိမ်၊ မကွေး၊ ရွှေဘို၊ မန္တလေး၊ ပဲခူးတို့မှာ ဒီသင်တန်းတွေ ပေးနေတယ်။ အခုလောလောဆယ်ကတော့ သိုသိုသိပ်သိပ် လုပ်နေတဲ့အတွက် မသိသေးဘူး၊ သိုသိုသိပ်သိပ် လုပ်နေတယ် ဆိုတာကလည်း ဖိအားပေးခံရမှာစိုးလို့။ တကယ်တမ်းကျတော့ နယ်တွေက အာဏာပိုင်တွေက ဖိအားပေးတာ ပိုပြင်းတတ်တယ်လေ။ အဲဒါကြောင့် သိုသိုသိပ်သိပ် လုပ်နေကြတယ်” ဟု သူက ဆိုသည်။
ဗေဒါကျောင်း၏ အမှတ်စဉ် ၄ သင်တန်းဖွင့်ပွဲကို လာမည့်တနင်္လာနေ့တွင် အမှတ် ၇ စမ်းချောင်းလမ်းရှိ တိုက်ခန်းအမှတ် 4B တွင် ကျင်းပမည် ဖြစ်သည်။
9:50 AM | Posted by Unknown
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ လွတ်လပ်သော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးနု၏ ရုပ်အလောင်းမြှုပ်နှံရာ ရန်ကုန်မြို့ ရေဝေးသုသာန်ရှိ အုတ်ဂူဘေး ကာရံထားသည့် သံတိုင်များ အခိုးခံရကြောင်း သမီးဖြစ်သူ ဒေါ်သန်းသန်းနုက ပြောသည်။
Tuesday, February 15, 2011 10:21 PM | Posted by Unknown
(မိုးမခရဲ့ စာပဒေသာ - ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း ကဏ္ဍမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အထောက်တော် လှအောင်တို့ရဲ့ အင်တာဗျူးကို တဆင့် ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။)
မေး ။ ။ ဒီကနေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲမှာ ပြည်သူတွေအောင်ပွဲ ခံမယ်လုိ့ ယုံကြည်ပါသလား။
ဖြေ ။ ။ မုချအောင်မြင်ရမယ်လုိ့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေဟာ အမှန်တရားဘက်က ရပ်တည်နေကြတာပဲ။ အမှန်တရားဟာ အောင်မြင်ရမှာပဲပေါ့။
မေး ။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နောက်မှာ ပြည်သူတွေ ရှိနေတယ်လုိ့ ယုံကြည်သလား။
ဖြေ ။ ။ ပြည်သူတွေနဲ့အတူတူ ကျမရှိနေတာပါ။ ကျောင်းသူကျောင်းသားကလေးတွေနဲ့ အတူ ကျမရှိနေတာပါ။ အခု အရေးအခင်း မပြီးမချင်း ကျောင်းသူကျောင်းသားကလေးတွေနဲ့ အတူတူ ကျမနေမယ်။
မေး ။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘာလုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားသလဲ။
ဖြေ ။ ။ ပြည်သူတွေ စည်းကမ်းရှိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့် စည်းကမ်းရှိဖို့ ကျမဆက်လက် နှိုးဆော်မယ်။ စည်းကမ်းရှိတယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ ဒီမိုကရေစီပါပဲ။
မေး ။ ။ ဒီကနေ့ ပြည်သူ့အုံကြွမှုကြီးမှာ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ ပြည်သူတွေ စည်းကမ်းရှိတယ်လို့ မြင်ပါသလား။
ဖြေ ။ ။ စည်းကမ်းပိုပိုပြီး ရှိလာပါတယ် ကျမထင်တယ်။ အစက စည်းကမ်းမရှိဘူး။ အခု ပြည်သူလူထုက ပိုပိုပြီးနားလည်လာတယ်။ အနောက်မုခ်မှာကျမ လူထုစည်းဝေးပွဲကြီးလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကစလို့ “စည်းကမ်းရှိပါ” ဆိုတဲ့ လှုံ့ဆော်မှုကလေးတွေ ထွက်လာတယ်။ အဲဒါ သိပ်ပြီးတော့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါလေးတွေနဲ့ လူထုကို သတိပေးနေတဲ့ သဘောပါပဲ။ နောက် ကျမ optimistic ဖြစ်သလားတော့ မသိဘူး။ ဒီအရေးအခင်းတွေကြောင့် နောင် မြန်မာတွေ ပိုပြီး စည်းကမ်းရှိသွားမယ်လို့ မျှော်လင့်တယ်။
မေး ။ ။ လက်ရှိ တိုင်းပြည်ရဲ့ အခြေအနေဟာ သိကိုဆိုးရွားနေတယ်။ ဒီအခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းဖို့ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းဦးမယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည် ဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်သလဲ။
ဖြေ ။ ။ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းတယ်ဆိုတာ မဖြစ်သင့်ဘူး။ တစ်ခါလဲဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီ။
မေး ။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆန္ဒကိုပြောနေတာပဲ။ ကျနော်မေးတာက စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းရင် တိုင်းပြည်ဘာဖြစ်မယ်ထင်သလဲ။ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်သွားမယ်ထင်သလား။ သွေးချောင်းစီးသွားမယ်ထင်သလား။
ဖြေ ။ ။ သိမ်းတဲ့ အပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပုံမျိုးနဲ့ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းမှာလဲ။ လူထုဆန္ဒကို လိုက်လျောချင်လို့ သိမ်းမှာလား။ ဒါဆိုရင် ပြဿနာမဟုတ်ဘူး။ လူထု ဆန္ဒကို အတိုက်အခံ လုပ်ဖို့ သိမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ သ်ိပ်ကို ပြဿနာတက်သွားမယ်ထင်တယ်။ ဆရာကောမထင်ဘူးလား။
မေး ။ ။ ကျနော်က မေးခွန်းထုတ်ဖို့လာတာပါ။
ဖြေ ။ ။ ဒါတော့ဘယ်တရားမလဲ။ ကျမပြန်မေးတာကိုလဲ ဖြေရမှာပေါ့။ လက်ရှိအစိုးရ အာဏာတည်မြဲဖို့ အတွက် လူထုရဲ့ဆန္ဒကိုအတိုက်အခံလုပ်ဖို့အတွက် စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းမယ်ဆိုရင် သွေးချောင်းစီးသွားလိမ့်မယ်။ ကျမ အဲဒါကိုပဲ စိုးရိမ်နေတာပါ။ ပြည်သူလူထုက ခံခဲ့ရပြီးဖြစ်ပေမယ့် ထပ်မကွဲစေချင်ဘူး။
မေး ။ ။ ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း အောင်ကြီးနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတင်ဦးတို့ လူထုအစည်အဝေးပွဲမှာပြောသွားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လို သဘောရပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတင်ဦးရဲ့ မိန့်ခွန်းကိုတော့ မဖတ်လိုက်ရဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ကြီး မိန့်ခွန်းကိုတော့ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ သူပြောတာနဲ့ ပြည်သူလူထု ခံစားရတာနဲ့ နည်းနည်းကွဲနေတယ်။ အဲဒါကို ပြည်သူလူထုဘက်က မကြိုက်နိုင်စရာအကြောင်းရှိနေတယ်လေ။ ကျမကတော့ တပ်မတော်နဲ့ ပြည်သူလူထု ကြားမှာ စိတ်ဝမ်းမကွဲစေချင်ဘူး။ ကျမပြောချင်တာက ပြည်သူလူထုဘက်က ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါ။ ခံရတဲ့ဘက်က ခွင့်လွှတ်ရတာကိုး။ ပြည်သူလူထုက တပ်မတော်အပေါ်ဘယ်တုန်းကမှ မပြစ်မှားခဲ့ပါဘူး။
မေး ။ ။ ဒီကနေ လူထုအုံကြွမှုပြဿနာမှာ တပ်မတော် အနေနဲ့ ဘယ်နေရာမှာ နေသင့်တယ်လို့ ယုံကြည်ပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ တပ်မတော် ကြားနေပါ။ ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အခြေအနေမို့ လူထုဘက်လည်းမပါနဲ့။ တိတိကျကျ ကြားနေပါ။ အစိုးရဘက်လည်း မပါနဲ့။ အစိုးရနဲ့လူထု ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ဖြေရှင်းကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီတပ်မတော်ဟာ ဖေဖေစတင်တည်ထောင်ပြီး ပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့တာပါ။ ဘယ်တပ်ဖွဲ့ တပါတီ၊ ဘယ်တစုံတယောက်ရဲ့ တပ်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ တိုင်းပြည်ရဲ့တပ်ပါ။ ပြည်သူတွေရဲ့တပ်ပါ။ တပ်မတော်ဟာ ပြည်သူ့အတွက်သား ဖြစ်စေရမယ်လို့ ဖေဖေ တဖွဖွပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီကိစ္စမှာ တပ်မတော်အနေနဲ့ တိတိကျကျ ကြားနေပါလို့ ကျမအတိအလင်း ပြောချင်ပါတယ်။
မေး ။ ။ ကိုယ်တိုင်ခေါင်းဆောင်ပြီး ပါတီဖွဲ့မလား။
ဖြေ ။ ။ မဖွဲ့ဘူး။
မေး ။ ။ သူများဖွဲ့ထားတဲ့ ပါတီကိုရောဝင်မလား။
ဖြေ ။ ။ မဝင်ဘူး။
မေး ။ ။ ဒီမိုကရေစီခေတ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးနုတို့ဖွဲ့တဲ့ ဒီမိုကရေစီနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ (ယာယီ) ကိုရောဝင်မလား။
ဖြေ ။ ။ လုပ်နေတယ်လို့တော့ ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမကိုဝင်ဖို့ မကမ်းလှမ်းပါဘူး။ ကျမကလည်း ဝင်ဖို့ စိတ်မကူးပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပါတီဆန်သွားမှာစိုးလို့ပါ။ ပါတီတခုကိုဝင်ပြီး နိုင်ငံရေးလုပ်တာမျိုးကို ကျမ မယုံကြည်ဘူး။ ကျမက စာပေနဲ့ ပဲမွေ့လျော်နေချင်တယ်။ စာပေသမားတွေ၊ အနုပညာရှင်တွေနဲ့ပဲ ပေါင်းသင်းနေချင်တယ်။
မေး ။ ။ သူတို့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုအပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘယ်လို သဘောထားသလဲ။
ဖြေ ။ ။ ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲ ပိုအောင်မြင်မယ်ဆိုရင် ကျမထောက်ခံရမှာပေါ့။
မေး ။ ။ သူတို့ကြောင့် ပိုအောင်မြင်မယ်ထင်သလား။
ဖြေ ။ ။ အဲဒါတော့ ကျမ မပြောနိုင်သေးဘူး။ သူတုိ့ဖွဲ့တာ တရက်ပဲ ရှိသေးတာကိုး။ ပန်းတိုင် တခုပဲရှိတယ်။ အဲဒီပန်းတိုင်ဟာ ဒီမိုကရေစီရရှိရေး ပန်းတိုင်ဖြစ်တယ်။ သူတို့ ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာ ကျမသေသေချာချာ မသိရသေးဘူး။ ဒါကြောင့် ပြောရတာ နည်းနည်းတော့ခက်ပါတယ်။
မေး ။ ။ ပြည်သူတွေ ဆင်နွှဲနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲ အောင်မြင်ပြီးသည်အထိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြန်မာပြည်မှာ နေမှာလား။
ဖြေ ။ ။ နေမှာပေါ့။
မေး ။ ။ နောင်လဲနေမှာလား။
ဖြေ ။ ။ လုပ်နိုင်တဲ့အထိနေမှာပေါ့။ ကလေးတွေ ပညာရေးပြီးသည်အထိတော့ ဟိုမှာနေပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ကျမ အသုံးကျနေတယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာပြည်မှာနေမယ်။
မေး ။ ။ တသက်လုံး အသုံးကျနေမယ်ဆိုရင်ကေ။
ဖြေ ။ ။ တသက်လုံးနေမှာပေါ့ဆရာရယ် ဒါပေမယ့် တခြားအသုံးကျတဲ့လူတွေရှိပါတယ်။ ကျမတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတယောက်တည်း ရှိမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ အဖြစ်မျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူး။ မနေဘူးလုိ့ ကျမပြောတာက မြန်မာပြည်မှာ မနေဘူး လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ နိုင်ငံရေး လောမှာ မနေဘူးလို့ ပြောတာ။
မေး ။ ။ နိုင်ငံရေးဆက်လုပ်ဖို့ နည်းနည်းမှ ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးလား။
ဖြေ ။ ။ မလုပ်ပဲ နေလို့ရရင် မလုပ်ချင်ဘူး။ ဒီနိုင်ငံရေးလောကထဲမှာ သိပ်မနေချင်ဘူး။ ဆရာလည်းသိပါတယ်။
မေး ။ ။ မလုပ်ရင်မဖြစ်တော့ဘူး ဆိုရင်ကော။
ဖြေ ။ ။ တိုင်းပြည်အတွက် မလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်လုပ်မယ်။ လုပ်ရင် တသက်လုံးလုပ်မယ်။ မိန့်ခွန်းပြောတာမျိုးတော့ သိပ်ဝါသနာမပါဘူး။
မေး ။ ။ ဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲမှာ ပြည်သူတွေ ဒီထက်ပိုပြီး အုံကြွလာအောင် လှုံ့ဆောင်ပေးဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား။ ဥပမာ ရုံးတွေ အလုပ်ရုံတွေ စက်ရုံတွေရှေ့မှာ၊ ရပ်ထဲ ရွာထဲမှာ မိုက်ကရိုဖုန်းကိုင်ပြီး လှုံ့ဆော်တာမျိုး။
ဖြေ ။ ။ ရည်ရွယ်ချက် မရှိပါဘူး။ အားလုံးပြည့်ဝသွားပြီလုိ့ ကျမထင်ပါတယ်။ ပြည်သူဘက်က အားကြီးနေပါပြီ။ ဒီအားကို စနစ်တကျ သုံးဖို့ပဲ လိုပါတော့တယ်။ ကျမကအဲဒါကိုပိုပြီး အရေးထားပါတယ်။ အားကတော့ကြီးပါရဲ့ အဲဒီအားကို မထိန်းနိုင်ရင် ပေါက်ကွဲသွားရင် ပြည်သူကိုပြန်ထိမယ်။ ပြီးတော့ ဆရာရယ် ဘလောက်ကြာကြာရုန်းကန်ရဦးမယ်ဆိုတာလဲ မသိနိုင်သေးဘူး။ အားမွေးထားပြီ စနစ်တကျ လုပ်သွားသင့်တယ်လို့ ကျမထင်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေခြေကုန်လက်ပန်းကျသွားမှာ ကျမ စိုးရိမ်တယ်။ အခုတောင် ကျမတို့အတော် ပင်ပန်းနေကြပါပြီ။
မေး ။ ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ညှာနေတာလား။
ဖြေ ။ ။ မညှာပါဘူး။ အားမွေးနေတာပါ။ နည်းနည်းကလေး ခြေလှမ်းမှားသွားတာနဲ့ရန်မယ်ရှာပြီး ပြည်သူကို ရန်လုပ်လာလိမ့်မယ်။ အဲဒါမျိုးကို ကျမစိုးရိမ်နေတာပါ။ ပြည်သူ့ဆန္ဒမြန်မြန်ပြည့်ဝမှ တိုင်းပြည်သက်သာမယ်။ ကြာလေ တိုင်းပြည်နာလေပဲ။ ဒါကြောင့် အားမွေးနေတာပါ။
မေး ။ ။ အားမွေးနေတာဟာ အချိန်ဆွဲနေတာနဲ့ မတူဘူးလား။ အချိန်ဆွဲနေရင်သွေးအေးမသွာနိုင်ဘူးလား။
ဖြေ ။ ။ သွေးမအေးပါဘူး။ သွေးပူတုန်းလုပ်တာ စစ်မှန်တဲ့ တကယ့်သတ္တိ မဟုတ်ဘူး။ သွေးအေးအေးနဲ့လုပ်မှ တကယ့်သတ္တိပါ။
မေး ။ ။ အုံကြွနေတဲ့ ပြည်သူတွေမှာ ဘယ်လို အရည်အချင်းရှိသင့်တယ်ထင်သလဲ။
ဖြေ ။ ။ ကျမရဲ့ သဘောကတော့ ပြည်သူလူထုဟာ လိုအပ်လိုဝုန်းခနဲ့ ထလုပ်စရာရှိရင် အသင့်အနေအထားမှာ ရှိရမယ်။ ရုတ်တရက် ရပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း ရပ်လို့ရတဲ့ control power ရှိဖိုိ့လိုပါတယ်။ ရှိလည်း ရှိစေချင်ပါတယ်။
မေး ။ ။ ၂၆ နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း ဝန်ထမ်းတွေ အတော် အကျင့်ပျက်သွားတာသတိထားမိသလား။
ဖြေ ။ ။ ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲ။
မေး ။ ။ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ က်ိစ္စ၊ ရုံးတွေမှာ လာဘ်ထိုးနိုင်မှ ကိစ္စဝိစ္စပြီးတဲ့ကိစ္စ။
ဖြေ ။ ။ သိပါတယ်။ ကျမက အခုလူထု တောင်းဆိုမှုတွေထဲ ဝင်လာကတည်းက စည်းကမ်းရှိရမယ်၊ ညီညွှတ်ရမယ်လို့ ကြွေးကြော်ခဲ့တယ်။ ဒီနှစ်ခု မရှိရင် ဘာမှ လုပ်လို့မရဘူး။ ရှေ့မဆက်နိုင်ဘူး။ စည်းကမ်းရှိရှိ ညီညီညွှတ်ညွှတ်နဲ့ လူတွေရဲ့ စိတ်ကို ပြောင်းပစ်ရမယ်။ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူကို ကျမသိပ်မှန်းတယ်။ ဒီတိုင်းပြည်မှာ လက်ဖက်ရည်ဖိုးမပေးရင် ဘာအလုပ်မှ မဖြစ်တော့ဘူး။ ကျမကတော့ တောင့်ခံတယ်။ ၁ နှစ်မှ တခါလာတဲ့ လူဆိုတော့ လက်ဖက်ရည်ဖိုး မပေးဘူး။ အလုပ်တော့ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး ။ ။ ဒါတော့ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သမီးကိုးဗျ။
မေး ။ ။ ကျနော်တို့ချင်း မတွေ့ပဲ ၃ ရက်အတွင်း ဘာတွေထူးခြားပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ အစကတော့ ပြည်သူလူထုနဲ့ အစိုးရကြားမှာ negotiator လုပ်ဖို့ ကျမကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့မရတော့ဘူး။ ပြည်သူလူထုဘက်က အပြတ်ရပ်လိုက်ပြီ။ ပြည်သူလူထုဘက်ကို အပြတ်လိုက်တောမယ်။
မေး ။ ။ ပါတီထောင်မှာလား။
ဖြေ ။ ။ မထောင်ပါဘူး။ ပြည်သူဘက်က ပြတ်ပြတ်သားသား ရပ်တာပါ။
မေး ။ ။ ကိုအောင်ဆန်းဦးအခု ဘယ်မှာလဲ။
ဖြေ ။ ။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာပါ။
မေး။ ။ သူပြန်လာဖို့ အစီအစဉ် ရှိသလား။
ဖြေ ။ ။ မရှိပါဘူး။
မေး ။ ။ ဟိုတလောတုန်းက သူ့အသံသွင်း တိတ်ခွေထွက်တယ်ဆိုတာတို့ ဗန်ကောက်က တဆင့် အသံလွှင့်တယ် ဆိုတာတို့ မြန်မာပြည်သူလူထုကို ပန်ကြားစာ သူက ထုတ်တယ်ဆိုတာတွေကော။
ဖြေ ။ ။ တခုမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်သူတွေ လျှောက်လုပ်တယ်ဆိုတာ မသိပါဘူး။ ကိုကိုဦးသာ ပြန်လာမယ်ဆိုရင် ပြည်သူတွေ ပိုအားတက်မယ်ထင်ပြီး လျှောက်လုပ်နေကြသလားတော့ မသိဘူး။ မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံတာမျိုးဖြစ်နေလို့ ကျမ သဘောမတူဘူး။ ဗန်ကောက်ကလွှင့်တယ်ဆိုတဲ့ အသံဆရာကြားလိုက်မှာပေါ့။ အဲဒါ ကိုကိုဦးရဲ့အသံ လုံးဝမဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံခြားကအကူအညီတွေယူပြီး ပြန်လာမယ်ဆိုတာမျိုး လုပ်ကြံတာ ကျမလုံးဝ လက်မခံနိုင်ဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံက မြန်မာတွေရဲ့ အရေးကို မြန်မာတွေပဲ လုပ်ရမှာပေါ့။
မေး ။ ။ နိုင်ငံခြားရောက်တဲ့ မြန်မတွေ အကြောင်းအမျုိးမျိုးကြောင့် ပြန်မလာနိုင်ကြဘူး။ ပြန်ခွင့်မရကြဘူး။ ဒီအပေါ်ဘယ်လို မြင်ပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်အပေါ်မှာ အမှန်တယ် သံယောဇဉ်ရှိတယ်။ ချစ်တယ်ဆိုရင် ပြန်လာကြပါစေ။ ဒါပေမယ့် မှန်တာပြောရရင် တချို့စီးပွားရေးကို ရှေ့တန်းတင်ပြီး ထွက်သွားသူတွေကတော့ တမျိုးပေါ့။ တချို့ကတော့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ တိုင်းပြည်ကို ပြန်မလာနိုင်ကြဘူး။ ပြန်မလာနိုင်သူုတိုင်းကို တိုင်းပြည်မချစ်ဘူးလို့တော့ မပြောနိုင်ဘူး။
မေး ။ ။ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်ဟာ ကမ္ဘာကြီးက ပြုတ်ကျကျန်နေခဲ့ပြီလို့ နိုင်ငံခြားစာစောင်တခုမှာ ရေးတာ ဖတ်လိုက်ရဖူးတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကလဲ သူများခြေလှမ်းတလှမ်းလှမ်းရင် ကျနော်တို့က ၄၊ ၅၊ ၆ လှမ်းလှမ်းမှ တန်ကာကျမယ်လို့ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုအအခြေအနေက ခြေလှမ်း ၃၊ ၄၊ ၅ ရာလှမ်းမှ ဖြစ်နိုင်ပါတော့မယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံခြားမှာ ရှိတဲ့ မြန်မာတွေရဲ့ အတတ်ပညာတွေ အတွေ့အကြုံတွေကို အသုံးချရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘယ်လိုသဘောထားပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ အသုံးချနိုင်ရင် ကောင်းတာပေါ့။ တိုင်းပြည်အပေါ်စေတနာ ထားတဲ့ လူဆိုရင် ဆွဲခေါ်နေစရာမလိုဘူး။ သူတို့ဘာသာ ပြန်လာပြီး လုပ်ကြပါလိမ့်မယ်။ တခုတော့ရှိပါတယ်။ ၂၆ နှစ်လုံးလုံးနိုင်ငံခြားမှာ နေပြီး အခုမှနေရာ လာယူကြတယ်လို့ ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင်သူတွေထဲက ပြောချင်သူ တချို့တလေရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလို ဝေဖန်လာရင် သူတို့အနေနဲ့ သဘောပေါက် နားလည်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ကျမကတော့ စေတနာရှိရင် ဘယ်သူမဆို ပြန်လာစေချင်ပါတယ်။ အဲဒါကို အမြင်မမရှင်းရင် ပြဿနာ ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။
မေး ။ ။ လက်ရှိ အစိုးရဖယ်ပေးပြီး ကြားဖြတ်အစိုးရ ချက်ချင်းဖွဲ့ ပေးဖို့ လူထုအုံကြွမှုကြီးက တောင်းဆိုနေပါတယ်။ သမ္မတ ဒေါက်တာမောင်မောင်က ဖယ်မပေးဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ အဲဒီကိစ္စကို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
ဖြေ ။ ။ ဖယ်မပေးရင် ဖယ်ပေးအောင် ပြည်သူလူထုက လုပ်ရမှာပေါ့။ ပြည်သူလူထုမှာအင်အားရှိနေပြီပဲ။
မေး ။ ။ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအပေါ် ဘယ်လိုမြင်သလဲ။
ဖြေ ။ ။ သိပ်ရိုးသားတယ်။ သိပ်တော်တယ်။ ဒီမိုကရေစီကို အရမ်းမြတ်နိုးတယ်။ အပြတ်သားဆုံး၊ အတက်ကြွဆုံးတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်။
မေး ။ ။ ပြည်သူလူထုကို ဘာပြောချင်သေးလဲ။
ဖြေ ။ ။ စည်းကမ်းရှိပါ။ ညီညွှတ်ပါ။ ဒီမိုကရေစီဦးတည်ချက် မပျောက်ပါစေနဲ့လို့ အလေးနက်ပြောချင်ပါတယ်။